Mandehandeha amin'ny zotra Ebro | Vaovao momba ny dia
Mandehandeha amin'ny zotra Ebro
Carmen Guillen | | España, General
Ilay Ebro Io no renirano lehibe indrindra any Espaina ary mikoriana 928 kilometatra sahabo ho eo, ny tanàna mandro sy ny fandroana rano amin'ny fiafarany. Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha hanao dia manokana amin'ny làlan'ny Ebro isika, mahita ny zava-dehibe sy ny manan-danja indrindra amin'ny tanàna tsirairay lalovany.
Atombohy amin'ny diany manontolo ny diantsika Tendrombohitra Cantabrian, manokana ao amin'ny tanàna fialantsasatra ao Fontibre, eo am-pototry ny Pico Tres Mares izay mahatratra 2.175 metatra ny haavony. Amin'ny ririnina, ireto tendrombohitra ireto dia mamelona ny renirano amin'ny ranomandry, tendrombohitra izay hahitanao azy koa Trano fialantsasatra Alto Campóo izay manana 6.880 mpanao ski ambony indrindra isan'ora ary manana hantsana maitso, manga sy valo mena, ary koa faribolana ski ski 2,5 km.
Raha mandroso 5 kilometatra lavitra isika dia mandalo Reinosa, tanàna indostrialy misy 75 km miala an'i Santander. Any Reinosa, ny fiangonan'i San Sebastián, miaraka amin'ny rindrina mahafinaritra, ary ny trano masin'i San Francisco, miaraka amin'ny fazade Herrerian, dia mendrika hitsidika. Avy any Reinosa isika dia afaka mitsangatsangana an-tongotra mankany amin'ny fiangonan'i San Martín de Elines (manodidina ny 3 km) na mankamin'ny sisa tavela amin'i Julióbriga.
3 Ny monasiteran'ny vato
Mamaky an'i La Rioja koa ny Ebro. Eto izy io dia miasa ho toy ny fetra eo anelanelan'ity vondrom-piarahamonina ity sy ny Basque Country ary Navarra. Manaraka ny fizotran'ilay renirano, ny fijanonantsika voalohany dia Haro, «renivohitry ny divay», tanàna lehibe. Ao no ahitanao ny fiangonan'i Santo Tomás, miaraka amina tranon'omby baroka mahafinaritra. Ny basilica an'ny Nuestra Señora de la Vega dia mitahiry ny sarin'ny Virjiny nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny lapan'ny tanàna Haro dia tamin'ny vanim-potoana neoclassical, tamin'ny taonjato faha-3, ary manodidina ny tanàna dia afaka mahita trano ambony maro isika. Raha tianao ny mitsangatsangana, koa avy any Haro ianao dia afaka mitsangatsangana an-tongotra (an-bisikileta ihany koa) mankany Briñas (9 km), Briones (11 km) ary Sajazarra sy Casalarreina (samy XNUMX km).
Manaraka izany dia mandalo isika Logroño, zava-dehibe enclave an'ny Camino de Santiago. Eto isika dia afaka mahita tranom-pivavahana manan-danja amin'ny fahagola sasany: ny Church of Santa María del Palacio, the Church of San Bartolomé, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, miaraka amin'ny tilikambo Mudejar sy ny Church of Santiago el Real, izay ahitantsika sary an'i Santiago mitaingina soavaly. Ao amin'ny Church of Santa María la Redonda, namboarina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, dia ho hitantsika ny sary hosodoko amin'ny Fanomboana nolokoin'ny mpanao hosodoko italiana Michelangelo.
Amin'ny 50 kilometatra miala ny renivohitra dia Calahorra. Ao amin'ity tanàna kely Calagurris Iulia tamin'ny andron'ny romana ity dia misy katedraly misy trano lehibe nataon'i Ribera, Zurbarán ary Tiziano, ankoatry ny hafa. Mahaliana ihany koa ny trano fitokanana Carmelite sy ny Fiangonan'i Santiago.
Handeha mankany isika izao Alfaro, iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Espana. Ity tanàna ity dia malaza indrindra noho izy rehetra resin'ny Cid tamin'ny taona 1073 ary ny iray amin'ireo tampon'ny tampon'ny vanim-potoana afovoany dia nankalazaina tao amin'izy ireo: ny fomba fijery eo amin'ny Kings of Castilla, León, Aragon ary Navarra.
Raha vantany vao niditra ny renirano tao Navarra izahay, dia nijanona tao Tudela, izay 95 km miala an'i Pamplona. Avy eto isika dia afaka mitsangatsangana an-tongotra mankany Bocal Real (5 km) miaraka amina tohodrano roa tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ao Tudela dia afaka mitsidika ny Lapan'ny Episkopaly sy ireo fiangonana ao La Magdalena sy San Nicolás izahay, ary koa tranon'ny lapa maromaro.
Tonga tany Zaragoza, renivohitra ary ivon'ny aragon. Ireto tranonkala / toerana / tranobe manaraka ireto dia tsy maintsy atao:
The Plaza del Pilar.
Ilay Tetezana Vato.
Ny Tilikambo Rano.
The Museum Museum.
Ny Museum Museum.
Tetezana Arivo Taona fahatelo.
Ny Ivotoerana Tantara.
Ny miresaka an'i Zaragoza dia miresaka tanàna iray lehibe indrindra ao Espana izay mitambatra ny fahagola sy ny moderina. Ao no ahitanao ireo tranobe manan-tantara sy maoderina ary zavatra manasongadina azy io dia iray amin'ireo tanàna madio indrindra any Espana.
Ny monasiteran'ny vato
Eo anelanelan'ny Calatayud sy Zaragoza dia ny Monasiteran'ny vato, ilaina amin'ny hatsarany voajanahary. I Alfonso II avy any Aragón no nanorina azy tamin'ny 1164, akaikin'ny Ony Piedra, ka io no anarany. Monasiteran'ny Cistercian goavam-be izy io, misy rindrina sy tilikambo boribory sy toradroa, izay misy turgency izay mampitombo ny renirano, ka avy eo riandrano sy farihy.
Ny Monasiteran'ny Vato dia fifantohan'ny mahasarika mpizahatany ary maneho tandindona ala maitso sy rano ao amin'ny tanàna iray izay nisy haintany maro taona lasa izay.
Raha tianao ny jono fanatanjahan-tena, azonao atao ny mampihatra azy ao amin'ny Renirano Ebro raha manapa-kevitra ny hanao ity dia ity ianao aorian'ny fivezivezeny, ho fanampin'ny fandinihana ireo sary sy tranobe kanto izay nofintininay fohifohy teto. Sahy manao an'ity dia mahaliana sy kolontsaina ity ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Mandehandeha amin'ny zotra Ebro
Ny famirapiratan'ny loharano Trevi nohavaozina
Volkano any Amerika Avaratra